Toban talo resume for resume weyn | khayraadka Job ka USAHello | USAHello
Ma rabtaa in aad shaqo wanaagsan ka heli? Waxaad u baahan doontaa resume weyn! halkan waxaa ku qoran 10 dib u talooyin iyo video ah inuu kaa caawiyo inaad qori resume-style American ah.
Resumeyga waa dokumenti in aad la abuuro in details macluumaad aad xiriir, shaqada aad rabto in aad, Shahaadooyinkaada, waayo-aragnimo shaqo, Aasaaskii hore ee waxbarashada, iyo macluumaad kale oo. Waxaa sheegayaa shaqeeyaha sababta aad u soo baxday booska.
Your resume waa waxa ugu horeeya ee shirkadda eegi doonaa marka ay go'aansadaan haddii ay doonayaan inay aad waraysi shaqo. Shirkadaha heli boqolaal resume. Marka qof eegayaa aad resume, aad qabtid ee ku saabsan 10 seconds inuu soo jiito qofka in. Xusuusnow in loo shaqeeyaha uu rabo in uu barto ee adiga kugu saabsan oo aan kula shaqeeya aad. Hubi in ay isticmaalaan erayga “I”, halkii “anaga”. looma isticmaali karo in aad hadalka ku saabsan naftaada. Si kastaba ha ahaatee, waa qayb muhiim ah oo habka shaqo baadhista ee USA. qaxootiga iyo doolka badan waxay leeyihiin waayo-aragnimo iyo xirfado badan leh, laakiin waxay u baahan yihiin resume ka fiican.
Hubi waa ay fududahay in la akhriyo. U geesi oo ka fiirso isticmaalaya version a soo gaabiyey of your name in hawl-shaqeeyayaasha inuu wax akhriyo. Ha ku darin magacaaga dhexe, gaar ahaan haddii ay tahay muddo dheer.
2. Hubi in aad isticmaasho ah "American" lambarka telefoonka iyo email address
Mararka qaarkood, qaxooti ah ama soo galooti isticmaali tirada WhatsApp ama tirada caalami ah. Isticmaal U.S.A a. lambarka taleefoonka iyo qori la isticmaalayo qaabka caadiga ah ee laga xoreeyo dalka ah. A., taas oo u dhaco sida tan- code degaanka ee parentheses, saddex lambar oo marka hore, markaas dumisaan a, ka dibna afar lambar ee ku xiga: (503) 544-1195.
Isticmaal nooca dib-u-fudud oo, cinwaanka email US. Ha isticmaalin cinwaan email ah in uu dhamaado sida waddan shisheeye: mohamedhusseinali17352@yahoo.fr. halkii, isticmaali fudud ah si ay u qor U.S.A. cinwaanka emailka. Tusaale ahaan: mo.ali@gmail.com. Xusa markaan si loo hubiyo cinwaanka email this! Fikrad wanaagsan waa in mid ka mid ah cinwaanka email in aad isticmaasho oo kaliya dhammaan codsiyada shaqada.
3. Isticmaal qaabka a arrintaasna waa u fududahay in ay si deg deg ah dib u eegis
Taas macnaheedu waxa weeye in la hubiyo wax kasta waa u fududahay in la fahmo. Waxaad ku samayn kartaa adigoo isticmaalaya qaab isku mid ah iyo aag kasta oo hubinaya khadadka wax kasta oo kor. Waad awoodaa download template ah resume free on our website.
4. Saar shaqada ama iskaa wax u qabso waayo-aragnimo ku salaysan US sare ee resume ah
Qor wax kasta oo aad ku hadasho luuqado, oo ay ku jiraan haddii aad kaliya ku hadli ama qori oo ku qoran luqado kuwa. Ha ku darin Ingiriisi. Waxaad tusi in aad tahay si fiican ugu Ingiriisi by isagoo resume wanaagsan la naxwaha habboon, xarfo, iyo formatting.
6. U hubso in aad ka mid ah aad waayo-aragnimo tabaruc
9. Hubi in font waa isku mid u ah resume oo dhan.
Mid ka mid ah isbedel yar laakiin muhiimsan ee aad ka dhigi kara si loo hubiyo in dhammaan qoraalka aad resume waa font isla. Inta badan, marka aad samaynayso resume, gaar ahaan haddii aad nuqul qaybo ka mid ah qoraalka ka document kale, font ku filaan ah u beddeli laga yaabaa in. Waxa ay taasi wareer in ay eegaan. Si aad u hubiso font waa sax, xulo qoraalka oo dhan. Marka dhan qoraalka la iftiimiyay, dooro font size iyo ka. Laba noocyada wanaagsan in la isticmaalo waa Times New Roman iyo Arial. Isticmaal size 10 ama 12 font si aad resume sahlan loo akhriyi karo.
Haddii aad soo diro aad resume sida document Word ah ama nooc kale oo ah dukumenti, waxaa laga yaabaa in aad bedelay ama ku dhacay. Waxaa fiican inaad u soo dir sida file PDF ah si ay u eegi doonaa si sax ah sida aad u rabto in aad. Laakiin hubi in aad leedahay version a badbaadiyey qaab Word iyo sidoo. Waxaad isticmaali kartaa version si itusi aad resume.
Daawo video ah oo ka mid ah 10 talooyin resume
The Refugee Center Online hadda waa USAHello. magacayaga Waxaan bedelnay si loo hubiyo in dadka cusub ee ka soo jeeda dhammaan dareemaan soo dhaweyn wanaagsan on our website iyo in our fasalka.
Talooyin resume dheeraad ah oo doorar heer-galo
Talooyin resume dheeraad ah oo doorar xirfadeed
ahaanayta resume: sida si ay u abuuraan resume shaqo-gaar ah
Shirkadaha isticmaalaan nidaamka raadraaca resume in shaandhayso codsiyada shaqada. Shaqooyinka badankood, Dad aan la reading aad resume. halkii, computer ah ayaa doonaya in uu arko haddii erayada aad resume dhigma sharaxaadda shaqada. shaqo A posted caadi helo boqolaal codsiyada.
Your resume waxaa laga yaabaa in dib loo eego by computer ah. Taas macnaheedu waxa aad leedahay si aad u hubiso in aad la abuuro resume shaqo-gaar ah. Mar kasta oo aad ka codsan, aad u baahan tahay si aad u hubiso sharaxaadda shaqada iyo waafaqayaan resume in ay. resume shaqo-gaar ah A Khasab ma aha in waxaa ka mid ah inuu eray walba oo ka sharaxaadda shaqada. Raadi keywords. Erayada furaha u tahay erayo iyo odhaaho loo isticmaalo inta badan. keywords badan ayaa hoos ku qoran “xirfadaha loo baahan yahay” qaybta. Tusaale ahaan, haddii aad codsanayso in ay ku xigeenka maamulka, aad dareento in erayo kale “xereynta”, “samaynta ballamaha”, iyo “jadwalka” isticmaalaan badan.
Qoraalka ah resume gaar ah shaqo ka mid noqon kara erayada in si kale loo dhigo beddelo macnayaal aad u la mid ah. Tusaale ahaan, laga yaabaa in aad la codsanayso shaqo oo doonaya ah "qoraa content". Waxaad laga yaabaa shaqeeyay sida a "abuure content" ka hor. Tusaale kale laga yaabaa in lagu beddelo weedha ah “fiiriyey shaqaalaha cusub” in “shaqaalaha ay qorteen”.
Marxaladani waxay qaadataa waqti iyo dhaqanka. Habka ugu fudud si ay u bilaabaan waa inay daabacdo sharaxaadda shaqada. Qaado waqti waxoogaa ah oo loo muujiyo oo hoosta ka xariiqay erayo aad u malaynayso in ay muhiim yihiin. iyaga dar gelin aad resume. Xusuusnow in daacadnimo waa muhiim. Ha ku darin wax xirfadaha in aadan haysan. website A waxtar leh, waayo, waxaad isticmaali kartaa waxa loo yaqaan jobscan.co. Waxaad gali kartaa resume iyo sharaxaada shaqada. Waxaad arki kartaa haddii aad leedahay eray ku filan oo kulan weedha u dhexeeya shaqada aad codsanaysid oo aad resume. Haddii ay jiraan dhowr, waxaad ku dari kartaa dheeraad ah si loo kordhiyo fursadahaaga helidda wareysi aad.
Isticmaal template ah
on our dib u page tusaalooyin, waxaad ka heli kartaa qaab fudud oo resume aasaasiga ah. awoodaan in ay soo bixi format ee Word oo beddeli Waxaad noqon doontaa in ay ku habboon codsigaaga u gaar ah.
dib u tusaalooyin